Beerka si dhakhso leh oo fudud loo shiilay | Cunnooyinka jikada
Beerka hilibka lo'da ee fudud
Laga soosaaray buugga cuntada 1080 waxaa qoray Simone Ortega, cuntooyinka Isbaanishka ee caadiga ah, cuntooyinka maanta ayaa loo tixgelin karaa inay yihiin noocyo talooyin ah, halkii laga siin lahaa lafdhabarta lafteeda. Waana in beerka shiilitaanka xitaa qaab fudud, sidoo kale ay leedahay tabaha.
Simone Ortega ayaa noo soo jeedinaysa beerka shiil saliid aan aad u kululayn kuna kari khal. Tani waa waxa aan inta badan sameeyo, in kasta oo fursadaha alaabtan dibadda ahi ay badan yihiin. Waad ku wada raaci kartaa filtarrada qaar ka mid ah toonta la shiilay, qaar khudaar ah iyo / ama baradho la shiilay si aad u siiso dhadhan badan.
6 isku-darka beerka
3/4 koob oo saliid ah
1 qaado oo dhir ah
1 qaado oo khal ah
Fiilooyinka la diyaariyey waa la diyaariyey, cusbaysan yihiin oo la shiilay ilaa inta ku jirta saliid aan aad u kulul; beerka waa inuu ahaadaa mid qunyar shiilan oo aan laqabsan. Markay shiilayaan, ku rid meesha loo adeegayo oo ku dabool kuleylka.
Isla digsiga, waxaan ku darnaa khalka iyadoo digsiga laga saarayo kuleylka si aysan saliidu ugu boodin. Waxaan si fiican u kululeynaa isku dar ah waxaanna u adeegsaneynaa sida maraqa isku darka.
Daadi dhir jarjarey dusha sare ee fillets oo u adeega.
Waqtiga karinta Daqiiqado 5
Wadarta waqtiga Daqiiqado 10
Talooyin, Cunnooyinka Hilibka
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » General » Talooyin » Beerka hilibka lo'da ee fudud
Aad baad ugu mahadsantahay cuntadaada, waa wax cajiib ah
Jawaab Hector Martinez
Waa hab fudud, laakiin had iyo jeer waa wanaagsan tahay in la xusuusto aasaaska.
Goormaan cusbo ku darnaa, Carmen?
Omelettes-ga, cuntada caadiga ah ee laga helo Cádiz
Kukiyada Shukulaatada Shukulaatada